Translation ike ụgbọala okporo ụzọ gị na saịtị
September 19, 2009 site na rịọ 4 Comments
Anyị natara ọmụma (na a ọmarịcha foto) si Mike Jan si iPhone bashing saịtị.
Bash.ch okporo ụzọ na-awụlikwa elu mgbe Transposh nyo wụnye
Transposh aims mee ka gị na saịtị ọtụtụ ihe ndị ọzọ mfe inweta ndị ọzọ, nke na-agụnye search engines. Nke a na n'aka na-enye ohere ọzọ ọrụ iji nweta gị na saịtị na-ahụ gị na ọdịnaya (ọbụna ma ọ bụrụ na mbụ e dere na asusu ha nwere ike ghara ịghọta). Nke a na saịtị eje ozi dị ka ihe nlereanya zuru okè, mbụ e ji dee German, mgbe ya oké ọdịnaya wee sụgharịa (na therefor ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị) ya apụghị iru skyrocketed 😉
Anyị n'anabata ndị ọzọ ịkọrọ ha ihe merenụ na-ekwu na nke a post, Ì nwere ụdị yiri ihe ịga nke ọma? Ihe ọ bụla? Gịnị ka ị na-eche ka na-efu efu? Anyị na-enwekarị obi ụtọ ịnụ.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: General Ozi Akpado Na: A